Uninzi lwethu inkqubo yokubala abakhweli Iimveliso ezinelungelo elilodwa lomenzi. Ukuthintela ukukopa, khange sibeke umxholo omninzi kwiwebhusayithi. Ungaqhagamshelana nabasebenzi bethu bokuthengisa ukuze bakuthumele ulwazi oluthe kratya malunga nathiinkqubo yokubala abakhweli.
HPC088 inkqubo yokubala abakhweli kukuchaneka okuphezulu (i-98% +) yemveliso yokubala abakhweli yomkhweli webhasi ezenzekelayo yokubala esekwe kwitekhnoloji yombono we-binocular stereo kunye netekhnoloji yokuhlalutya ividiyo ekrelekrele. Ikhamera ye-binocular yeinkqubo yokubala abakhweli Uyilo loyilo olufana nolwabantu-oluqokelela ulwazi lwentshukumo yabakhweli ngexesha lokwenyani kuluhlu lomnyango, kwaye ngokukhawuleza lubala idatha ye-3D yomkhweli ojolise kumqhubekekisi womfanekiso, kubandakanya ukuphakama komkhweli \_ ububanzi begxalaba, njl.njl. Kwiimpawu zomntu Ukucoca ngokuzenzekelayo izinto ekujoliswe kuzo (ezinje ngeetroli, izinto, njl.njl.) Kungafezekisa ukubonwa ngokuchanekileyo okuphezulu nokuba kuselangeni okanye kwimeko emnyama.
HPC088 inkqubo yokubala abakhweli ine-RS232, i-RS485, iindidi ezimbini zonxibelelwano lwedatha, kulula kakhulu ukuba ujongane nenkqubo yomntu wesithathu ukuqonda unxibelelwano lwedatha.
Ikhamera ye-binocular ye inkqubo yokubala abakhweli isebenzisa uyilo lobunjineli iliso lomntu, eyakhelwe-ngaphakathi kwiikhamera ezimbini ze-CCD ukuqokelela imifanekiso ye-3D ekujoliswe kuyo, kunye nokuqokelela imijelo yevidiyo-yexesha lokwenyani ngesantya seefreyimu ezingama-25 ngomzuzwana. Inkqubo ye-inkqubo yokubala abakhweliinomsebenzi wokulwa nokushukuma kwaye ilungele ukusetyenziswa kwimeko yebhasi. Inokukhanya ngokuzenzekelayo ngokungqinelana nokusingqongileyo Ubungakanani bokukhanya kwe-infrared light kunokusetyenziswa ngesiqhelo emini okanye ebusuku.
Iprosesa yomfanekiso we inkqubo yokubala abakhweli inegrafikhi yokusebenza eyakhelwe-ngaphakathi ephezulu eyenzelwe iprosesa ye-DSP, eqhuba ulwazi lwevidiyo yeekhamera ezimbini ze-binocular ngexesha lokwenyani ngokwe-algorithm esekwe kwangaphambili, ibala inani labakhweli lexesha lokwenyani nangaphandle kweminyango emibini ibhasi, kwaye unxibelelana nomntu wesithathu nge-RS232 kunye ne-RS485 ujongano lwenkqubo Le nkqubo iqhuba utshintshiselwano ngedatha.
Iprosesa yomfanekiso ingakhiwa kwimodyuli ye-GGM (ngokuzithandela), enokuqonda ukubekwa kwe-GPS kweebhasi kunye ne-3G \_ 4G yokuhambisa idatha yenethiwekhi, inkqubo yokubala abakhweli Unokwenza ingqokelela epheleleyo yedatha, ukuhanjiswa kwedatha, umsebenzi wokumiswa kwezithuthi, kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza kwezicelo.
Inkqubo ye- inkqubo yokubala abakhweli Iprosesa ifakwe kwindawo efihliweyo yesilingi yebhasi. Ukuba kusetyenziswa imodyuli ye-GGM, i-eriyali yeGPS \_ GPRS kufuneka ibekwe kwindawo apho umqondiso wamkelwe kakuhle.
I-MRB yevidiyo yokuhamba yabakhweli ngokuzenzekelayo
Sineentlobo ezininzi ze-IR inkqubo yokubala abakhweli, 2D, 3D, AI inkqubo yokubala abakhweli, kuhlala kukho enye eya kukufanela, nceda unxibelelane nathi, siya kuncoma eyona ilungileyo inkqubo yokubala abakhweli yeyakho ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Egqithileyo I-MRB ikhawuntari yomkhweli ozenzekelayo yebhasi HPC168
Okulandelayo: MRB Mobile DVR yesithuthi
Ikhawuntari yoMkhweli oZenzekelayo
Isithuthi esiJonga ukuHlala
Ikhawuntara yabahambi ngeebhasi
Umkhweli Wokubala woluvo
I-MRB ikhawuntari yomkhweli ozenzekelayo yebhasi HPC168
MRB Mobile DVR yesithuthi
Ikhamera yemoto ye-MRB ye-DVR ephathekayo